Enoshima Prism ( 2013 ) - Myanmar Asian TV
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ 2013 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Japanese Comedy , Sci-Fi ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါ …
အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် Sota Fukushi နှင့် Tsubasa Honda တို့က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် …
ငယ်ငယ်ကတည်းက အရမ်းခင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း၃ယောက် …
တယောက်သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ ရှူတဟာ သူ့ကြောင့် ဆခု သေရတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်တင်နေခဲ့ပါတယ် …
ဆခု ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ဆခု မသေဆုံးခင် တစ်ရက်အလိုကို ရှူတ က မထင်မှတ်ပဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ …
သူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဆခု ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ပြီး အတိတ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ကာ အနာဂတ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်မလား ?? ဒါမှမဟုတ် ကံကြမ္မာရဲ့အလိုကိုပဲ လက်ခံလိုက်ရမလား ?? ကိုတော့ Enoshima Prism ဆိုတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ အဖြေရှာလိုက်ရအောင်နော် …
Rating အရ IMDb မှာ 6.1/10 နှင့် MyDramaList မှာ 7.7/10 အသီးသီး ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ် …
File Size : 726 MB ( 720p ) | 324 MB ( 360p )
Actors: Shuuhei Nomura, Sota Fukushi, Tsubasa Honda
Openload.co Myanmar726 MB Download Soliddrive.co Myanmar726 MB Download Openload.co Myanmar324 MB Download Soliddrive.co Myanmar324 MB Download
Trailer: Enoshima Prism ( 2013 )